Global Voices teny Malagasy » Bolivia: Mpanaramaso ny Fahitalavitra Boliviana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 19 Jolay 2017 20:29 GMT 1	 · Mpanoratra Eduardo Avila Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Amerika Latina, Bolivia, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Sarimihetsika
Mbola tsy nahatratra ny tahan'ny loharanom-baovao voalohany ny bilaogy ao Bolivia mba hifaninana amin'ireo endrim-pifandraisana hafa. Mbola manjaka ny fahitalavitra amin'ny fomba fahazoan'ny olom-pirenena ny vaovao sy hanarahan'izy ny zava-mitranga ankehitriny. Ny bilaogy La TeVelisión [ES] , nosoratan'i Rodrigo Serrate, dia mikendry, araka ny teny filamatrany hoe, «ho an'ny fahitalavitra tsara indrindra mendrika antsika». Tsy mamela ny ara-politika ho afa-bela ny tsikerany sy ny fijeriny momba ny toetry ny fahitalavitra Boliviana .
Namoaka lahatsoratra mikasika ny olana niteraka ahiahy lehibe teo amin'ireo bilaogera i Serrate. Tamin'ny lahatsoratra tany am-boalohany tao amin'ny Global Voices , tsy faly tamin'ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fantsona fahitalavitra tantanin'ny fanjakana mba hanova ny fangon'ny loko telon'ny sainam-pirenena Boliviana ny bilaogera. Fa fango mifanakaiky amin'ny sainam-pirenena whipala no nasolo izany, izay nampitaraina ny maro, satria tsy misolo tena ny firenena manontolo. Nahatsikaritra avy eo i Serrate fa niala tamin'ny fanapahan-keviny ny fantsona ary nampiditra fango vaovao izay miverina amin'ny loko telon'ny sainam-pirenena Boliviana . Nankasitraka izany fanapaha-kevitra izany izy, na dia malahelo aza fa tsy maintsy soloina indray ny rehetra, ny mikrôfôna sy ny fitaovana hafa nisy ny fango teo aloha.
Tamin'ny lahatsoratra vao haingana indrindra, naka pikantsary tamin'ny vaovao tamin'ny fantsom-pahitalavitra Sitel i Serrate. Tamin'ny tantara momba ny kolikoly nampiadihevitra vao haingana tao amin'ny antokony izay nahasaringotra ny filoha Morales, nampiarahan'ny fantsom-baovao tamin'ny sariitatra misy an'i Morales tezitra ny tantara . Nanoratra izy fa nilaza ny vaovao hoe, “tahaka izao ny filoha Evo Morales Ayma taorian'ny raharahan-kolikoly…” Ny lohatenin'ny lahatsorany dia hoe “Vaovao Izany?” manasongadina fa tsy misy fomba hiasan'ny fantsom-baovao.
Ao amin'ny efijery lehibe, manome ny fandalinany manokana momba ny sarimihetsika Boliviana vao haingaina indrindra  antsoina hoe Los Andes No Creen En Dios  (Tsy Matoky An'Andriamanitra ny Andes) natao tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 i Luis Rodríguez of Diseccionando a la Musa Perdida [ES]. Na dia tsara kalitao aza ny famokarana, ary indrindra ny feo, tsy dia nanintona ny teatiran'i Rodriguez, satria nanana olana teo amin'ny soratra sy ny mpilalao izy.
Namoaka lahatsoratra momba ny “Charango Controversy ,”i Miguel Esquirol of El Forastero, ary gaga ny ankamaroan'ireo Boliviana raha nampahafantatra ilay mpihira U2, Bono, miaraka amin'ny charango fitaovana teratany Shiliana ny filoha Shiliana Michelle Bacheletas. Maro ireo mandray izany fitaovana izany ho mampiavaka ny Boliviana. Ankoatra izany, notakonan'ny daroka baomba hafahafa sy mampalahelo tao La Paz  izany adihevitra izany, izay hita porofo fa manana fototra hafahafa ilay kamikazy (mpidaroka baomba), ary nanoratra momba izany ny bilaogera marobe.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/07/19/103605/
 La TeVelisión [ES]: http://latevelision.blogspot.com/index.html
 lahatsoratra tany am-boalohany tao amin'ny Global Voices: https://www.globalvoicesonline.org/2007/02/26/bolivia-the-changing-face-of-the-flag/
 niala tamin'ny fanapahan-keviny ny fantsona ary nampiditra fango vaovao izay miverina amin'ny loko telon'ny sainam-pirenena Boliviana: http://latevelision.blogspot.com/2007/03/logo-de-tvb-cambia-de-colores.html
 nampiarahan'ny fantsom-baovao tamin'ny sariitatra misy an'i Morales tezitra ny tantara: http://latevelision.blogspot.com/2007/03/esto-es-noticia.html
 manome ny fandalinany manokana momba ny sarimihetsika Boliviana vao haingaina indrindra: http://diseccionandomusas.blogspot.com/2007/03/en-quin-creen-los-andes.html
 Los Andes No Creen En Dios: http://www.losandesnocreenendios.com/
 Charango Controversy: https://www.globalvoicesonline.org/2006/03/27/the-charango-controversy/
 daroka baomba hafahafa sy mampalahelo tao La Paz: https://www.globalvoicesonline.org/2006/03/29/the-week-that-was-bolivian-blogs-23/